एउटै सडकको तीन पटक शिलान्यास ? - Gandak News
एउटै सडकको तीन पटक शिलान्यास ?
नेताको घर-घरमा कालोपत्रे, जनता धुलाम्य सडकमा
महेन्द्र जिसी द्वारा २ चैत्र २०७५, शनिबार १९:२२ मा प्रकाशित
महेन्द्र जिसी, पर्वत । पर्वतको कुश्मा दुर्लुङ हुँदै क्याङ पुग्ने सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्ने भन्दै तीन पटकसम्म शिलान्यास गरिसकेपनि निर्माण हुन सकेको छैन् ।
बिभिन्न दलका नेताहरुले तीन पटकसम्म शिलान्यास गरिसकेको उक्त सडक खण्ड कालोपत्रेको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण अहिलेसम्म कालोपत्रे हुन नसकेको हो ।
दुई बर्षदिन अघि नै नेपाली काँङ्ग्रेसका नेता युवराज गुरुङले शिलान्यास गरिएको उक्त सडकमा शुक्रबार पुन प्रतिनिधि सांसद पदम गिरीले शिलान्यास गरेका छन् ।
२०६५ सालमा तत्कालिक जिविसको मार्फत ¥याफ थ्री परियोजना मार्फत ट्र¥याक खोलिएको सडकको कालोपत्रे गर्न अहीले सम्म तीन पटक शिलान्यास भईसकेपनि कालोपत्रे भने हुन सकेको छैन् ।
‘जति पटक शिलान्यास गरेपनि कालोपत्रे हुने हैन । हामी जनतालाई सास्ती उस्तै हो ।’ नाम नबताउने भन्दै एक स्थानीयले भने, ‘यो सडक कालोपत्रे गर्ने भन्दै नेतादेखि सांसदसम्मले गरि थीन पटक शिलान्यास गरिसके । जुन जोगि आएनि कानै चिरेको भनेजस्तै जस्ले शिलान्यास गरेपनि कालोपत्रे भाको छैन् ।’
जुन नेता सांसदले पनि सडकको शिलान्यास गरेर छाड्ने तर काम भए नभएको बिषयमा चासो नदिने भन्दै स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
उक्त सडक खण्डको कालोपत्रे कुल एक करोड रुपैँयाको लगानीमा हुन लागेको हो । ‘यस पटकको शिलान्यास पहिले जस्तो हुँदैन । जसरि पनि सडकको शिलान्यास हुन्छ ।’ सांसद गिरीले भने, ‘सडक भनेको सम्वृद्धिको मुख्य आधार हो । तसर्थ म आफ्नो कार्यकाल भिबै जिल्लाका मुख्य सडकहरु कालोपत्रे गरेर छाड्छु ।’
पर्वतका अधिकांस राजनितिक दलका नेताहरुको घरसम्म कालोपत्रे सडक पुगेको देख्न पाइन्छ । तर, २०६५ सालमा खोलिएको आम सर्बसाधरण नागरिकहरुलाई आवत जावत गर्ने उक्त सडक खण्डमा तीन पटकसम्म शिलान्यास हुँदा पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन् ।
पार्टीका नेताहरु सबैले आफुलाई पाइप पर्ने ठाउँको सडक मात्रै गुणस्तर बनाउने पहलमा लाग्न थालेपछि सर्बसाधरण नागरिकको आबश्यकता भएको ठाउँको सडक गुणस्तर हिन नै छ ।